How To Build A Snowboard Jump│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
ဆီးနှင်းများစွာနှင့်ပြည့်နေသောတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုရှာပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်နှင်းလျှောစီးခုန်တည်ဆောက်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဤရိုးရှင်းသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ. ဤတွင်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သောအရာကိုပါပဲ: 1. တည်နေရာတစ်ခုရှာပါ. ကောင်းမွန်သောဆင်ခြေလျှောနှင့်စတင်ပြီးမတ်စောက်သောနေရာများတွင် ဦး စားပေးသင့်သည်, သင်၏ဆင်းသက်ရန်နေရာလုံလုံလောက်လောက်ရှိပါစေ. 2. ဆီးနှင်းဂေါ်ပြားကိုထုတ်ပစ်ပါ, ရရှိနိုင်မယ့်ပေါ့ပါးအလေးချိန်ရှိပါတယ်. မိုsnow်းပွင့်တက်ပုံ. 3. စနိုးဘုတ်စီးခြင်းသည်ခုန်၏ရှေ့တွင်ကောင်းသောငြမ်းကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်. 4. မိုsnow်းပွင့်ချထုပ်ပိုး, သင်၏ဘုတ်အဖွဲ့သည်အကောင်းဆုံးလုပ်လိမ့်မည်, ရုံခညျြနှောငျဖို့ဆွဲထားခြင်းနှင့်ခြေရင်းနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့စတင်ပါ. တောင်ကုန်းဟာအလုံအလောက်မတ်တတ်နေရင်သင်နှုတ်ခမ်းအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး. 5. အတွက်ပြေးမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်…သင်စင်ကြယ်သောချဉ်းကပ်မှုရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ. ချဉ်းကပ်လွန်းကြမ်းတမ်းသောကြောင့်ထွက် back ရန်လိုတူသောဘာမျှရှိပါတယ်. 6. စမ်းသပ်မှု. များသောအားဖြင့် sucker မိတျဆှေ (သွန်းအတွက်တစ်ဝက်တစ်နှစ်သုံးစွဲသည်). သငျသညျအမြင့်ဆုံးပျံသန်းသည်အထိဒဏ်ငွေညှိ! သိကောင်းစရာများ: 1. ကွဲပြားခြားနားသောအစက်အပြောက်ကနေ hit နှင့်အချောမွေ့ဆုံးဆင်းသက်ဇုန်ထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားပါ. 2. လှည့်ကွက်အသစ်များကိုသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာလေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်. ရုံသူတို့ကိုရိုက်နှင့်သူတို့ကိုရိုက်စောင့်ရှောက်လော့. သငျသညျသိမီ, သင်နဂါးလှည့်ကွက်ဆွဲပါလိမ့်မယ်. 3. ဤညွှန်ကြားချက်များသည်အပန်းဖြေစခန်းများတွင်ရှိနေစဉ်အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိပြီးသားတောင်ပေါ်ခုန်များပေါ်တွင်ရှိသည်. ထိုနေရာမျိုးမှနေရာတစ်ခုရှာရန်ကြိုးစားပါ. သင်လိုအပ်မည့်အရာများ: ‘ ဂေါ်ပြား ‘ ဟေးလ် ‘ နှင်း ‘ နှင်းလျောစီးတစ်ခုတည်ဆောက်ပုံကိုစီးရန်လိုအပ်ချက်
Posted Articles Title : နှင်းလျောခုန်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်
■Link To This Post (HTML code) : နှင်းလျောခုန်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်
■Trackback URL : နှင်းလျောခုန်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်
ကိုယ်ခံပညာ: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်း, အပိုင်း 2
ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမား McElwain သည်လူသားများအတွက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်
ရေအောက်ငုပ်ခြင်း: တစ် ဦး ကဖလော်ရီဒါစွန့်စားမှု
လင်းယုန် SeaChamp – မျက်နှာပြင်ကြီး, Big Color GPS Fish Finder
ပင်လယ်လှေစီးစီး: Alaska တော
ဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက် – သင်၏ဂိမ်းကိုသွားရန်နည်းလမ်းအမှန်
Gun Safes – သင့်ကိုသူတို့ကူညီပေးနိုင်ပုံ
Ronnie Lott : 1981 နေ့ပုံမူကြမ်း
ကောင်းသော Paintball မျက်နှာဖုံးကဘာလဲ?
Face mask သည် paintball ၏အားကစားကစားရာတွင်အရေးအပါဆုံးသောအကာအကွယ်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ဘောလုံး၏မျက်လုံးများကိုတစ်စက္ကန့်လျှင် ၃၀၀ အထိအမြန်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်စေသောဘောလုံးများမှကာကွယ်သည်။. အများစုသည်မျက်နှာနှင့်နားများကိုလုံး ၀ ဖုံးအုပ်ထားသည်, ဒါပေမယ့်မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ၀ တ်ဆင်ရတာကြိုက်သူတွေပါ, မျက်စိကိုသာကာကွယ်ပေးခြင်း. Paintball မျက်နှာဖုံးများသည်မည်သည့်တိုက်ရိုက်ရိုက်ချက်ကိုမဆိုစုပ်ယူနိုင်သည်, မည်သည့်အကွာအဝေးသို့မဟုတ်အကွာအဝေးကနေ. သာမန်မျက်မှန်ကာမျက်မှန်တစ်စုံသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောသဘောသဘာဝကိုသာပံ့ပိုးပေးပြီး၎င်းသည်ပန်းချီကားအားပိတ်ဆို့ရန်တည်ဆောက်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကိုအန္တရာယ်ကြီးသည့်အန္တရာယ်တစ်ခုသာပေးလိမ့်မည်။. paintball mask ထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းအားလုံးသည် DOT လုံခြုံရေးစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လုံခြုံရေးစံနှုန်းများကိုတိုင်းတာသည်. မျက်နှာဖုံးရဲ့ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုအရေးပါမှုသည်. ရာဘာနှင့်မတူသောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမျက်နှာဖုံးများရှိသည်, အမြှုပ်မှပလပ်စတစ်. တစ်ယောက်ယောက်ကိုငှားရမ်းမယ့်အစားကိုယ်ပိုင်မျက်နှာဖုံး ၀ ယ်တာဟာပညာရှိတဲ့အကြံဖြစ်တယ်. ၎င်းသည် paintball မကစားမှီဝယ်ယူသောပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သင့်သည်. မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်မှုအားသင့်မျက်နှာနှင့်စနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးသေချာစွာကြည့်ရှုနိုင်စေရန်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ပျော်မွေ့ပါစေ. အဆိုပါမှန်ဘီလူးမျက်နှာဖုံးရဲ့အထင်ရှားဆုံးအရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ; ထို့နောက်ရေမြှုပ်ကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းသည်ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ရှိမရှိနှင့်ဒီဇိုင်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ 1. ထုံးစံအတိုင်း, paintball မျက်နှာဖုံးများတွင်အပူမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အပူမှန်ဘီလူးများရှိလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မြူမှုန်ဝါးမှုအတွက် anti-fog ဖြစ်လိမ့်မည်: ၎င်းတို့သည်သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်မှန်ဘီလူးမှလျှောက်ထားသောအေးဂျင့်များအတွက်ဆန့်ကျင်မှုမလိုအပ်ပါ. ဤရွေ့ကားအပူမှန်ဘီလူးပိုမိုကုန်ကျပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သူတို့ပဲတက်ခတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်. 2. ဆေးသုတ်ထားသောဘောလုံးမျက်နှာဖုံးတွင်အမြှုပ်သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်နှစ်သိမ့်သင့်ရဲ့အဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်. ဥပမာအားဖြင့်,a‘Vforce ချပ်ဝတ်တန်ဆာ’ ရေမြှုပ်တစ် neoprene အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် ‘ ကောင်းသောအမြှုပ်တစ်ခုဟုယူဆသောအမြှုပ်အမျိုးအစား, ဒါပေမယ့်မသက်မသာဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ force Vforce Shield ကို’ နှင့် ‘Vforce Profiler’ ဝတ်ဆင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသောပွင့်လင်းသောဆဲလ်နှင့်အလွှာနှစ်ခုအမြှုပ်ဖြစ်သည်. အဖွင့်ဆဲလ်အမြှုပ်များကိုခေါင်းအုံးများတွင်သုံးသောမှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်. 3. စတိုင်နောက်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. အမြှုပ်များနှင့်မှန်ဘီလူးများသည်စျေးသက်သက်သာသာရှိသောမော်ဒယ်များနှင့်အရည်အသွေးတူသော်လည်းပင်ပိုမိုစျေးကြီးသောမျက်နှာဖုံးများရှိသည်, ဒါပေမယ့်ခြားနားချက်မျက်နှာဖုံး၏စတိုင်၌တည်ရှိ၏. အမြော်အမြင်ရှိရှိရွေးချယ်ပါ၊; သင်၏လုံခြုံမှုသည်အမြဲတမ်း ဦး စားပေးသင့်သည်! ကောင်းသော Paintball မျက်နှာဖုံးကဘာလဲ?
Discount pool tables are commonly available. Check your local classified listings for liquidation closeout sales, auctions for seized items from bankrupted businesses, နောက် ... ပြီးတော့. There you might be able to nababrand new pool table forafraction of its book value. Discount pool tables are discounted foranumber of reasons. Sometimesamodel will no longer be manufactured; sometimesatable will be overstocked because it is an unpopular style, oradealer may bee trying to make money faster by slashing prices. You can buy these discounted tables from manufacturers or from third-party detailers. Another great place to buy discount pool tables is www.overstock.com. Go to that website and enter ‘pool tables’ into the search field. Browse through the options. The ‘new’ prices will appear crossed out, and below that, the offering price will appear. Sometimes this lower price will be half as much as the higher price. Shipping prices can be as little asafew dollars. ဥပမာ, you can buyasolid ash 8-footer by BCA, featuringamahogany finish, 3-piece slate bed, and ability to be taken apart and stored. The new price on this model is about five grand. The overstock price is about two grand: က $3000 savings, ဒါမှမဟုတ် 60% off the regular price. Shipping isaridiculously low $2.95. No matter where you buy your cheap pool table, first decide what you are looking for. What size do you need: 7, 8, ဒါမှမဟုတ်9ပေ? It depends on how much space you have. Do you want the table to come in one solid piece (sturdier), or in multiple pieces (easier storage)? What kind of look are you going for: သစ်သား, vinyl, metal? One last thing word of advice: always ask what the warranty entails. Just because it is less expensive than full price, that doesn’t mean you should go throwing away hundreds or thousands of dollars onacheap table. A Guide to Discount Pool Tables
metal hunting, metal, metal detector, treasure hunting, ဝါသနာ, make money Article Body: Metal detecting is fast becoming one of the hottest hobbies in town.You have seen scores of people using metal detector on beaches and at parks. Your neighbours kid told you how he foundahistoric gold coin in the backyard using his metal detector and madeatidy sum selling it to the antique shop down the street. Your friend has just bought one of the sleekest looking metal detector and has to show it off. All sound good, but WAIT, before you jump onto the bandwagon, be sure you know howametal detector work and how to get the ideal piece for yourself. Although there are many brands available, hobby metal detectors all have common parts and components. ပုံမှန်အားဖြင့်, the metal detector consists of the stabilizer which keeps the unit steady as it is swept to and fro, the control box (which contains the circuitry, controls, speaker, batteries and microprocessor), the shaft which connects the control box and the search coil, and the search coil to detect the buried treasure. Metal detectors function based on the principles of? electromagnetic induction. The search coil generates an electromagnetic field around itself whenacurrent passes through it. In the presence ofametal item, this magnetic field is changed and induces electric currents called eddy currents in the metal item. The eddy currents generate their own magnetic field and generate an opposite current in the coil. This in turn producesasignal indicating the? presence of metal. The price tag ofametal detector range between $100 နှင့် $600. ဒါပေါ့, added features and greater sensitivity come withahigher price tag. Here are some considerations before committing on your metal detector: Intended use – What do you use the metal detector for-gold prospecting, home or work use, jewellery hunting, relic hunting, coin shooting or beach hunting? While most common detectors in the market are “general purpose” metal detectors, there are models which cater to specific activities. Frequency of Use – How often do you treasure hunt? If you plan to useametal detector several hoursaweek, look foramodel with more electronic features and higher accuracy. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, bear in mind what we said earlier, added features meansabigger price tag. Experience of user – Metal detectors come in different sizes and complexity. Many brands have fuss free models developed specially for juniors. Gender – Asarule of thumb, ladies prefer light-weight models that allow them to be carried around effortlessly. စျေးနှုန်း – Metal detectors are relatively inexpensive on their own. သို့သော်, you may want to include in your budget accessories such as headphones, digging tools and carrying bags on top of the equipment itself. Buy the accessories together with the detector and the merchant will normally give youadiscount. Warranty – Check out the warranty period for the product. Most brands providesa5-year warranty for their products. More importantly, do your research! There are many review websites for metal detectors that offer comparisons amongst brands and models. Whatever you are looking for inametal detector, there will beametal detector to suit your needs. Choosing Your Power Metal Detector? Your Secret Weapon To Successful Treasure Hunting
Nothing beatsaday of flyfishing. The rhythmic pulse of the cast, the attention to river and stream patterns, and the love of the fish and its behavior itself all serve to quiet the mind and relax the body. This article will discuss one aspect of fly fishing equipment – the wader – which, if chosen properly, will make your outingalot more enjoyable. Staying Dry – Waders Materials generally used in waders today are: Nylon. Nylon waders are an improvement over traditional rubber as they are far lighter. They are also generally less expensive than other modern wader materials. But they have the disadvantage in that they do not allow for air circulation. Neoprene. Neoprene waders share with scuba diving wetsuits the ability to ward off cold, as they come in different thicknesses. The thicker the wader, the warmer the angler remains in colder weather. They share with nylon the disadvantage in that they are not breathable. They are also less expensive than the breathable type of wader. Breathable waders. Newer, “breathable” တော, such as those made of Gore-Tex, allow for sweat and body heat to escape while still keep the angler dry. This type of wader is supremely comfortable for longer, hotter fishing conditions. Many types of breathable materials are available, with Gore Tex generally being the most expensive. In terms of wader types, there are two basic options: The boot-foot and stocking-foot wader. Boot foot waders are waders with uppers that are usually made of neoprene or coated nylon, attached in one piece to the rubber wading boot. This type of wader has the advantage for the angler of having no need to buyaseparate wading boot. သို့သော်, they are more difficult to put on and take off then stocking-foot waders. They can also be heavy, bulky, and less comfortable for extended periods. This type of wader system is actually composed of two parts. The first is the wader itself, which hasaneoprene sock or stocking attached. The second isadedicated wading boot, which is slipped on over the stocking. The advantage of this system is that it is easier to put on and take off than the boot-foot wading system. What you choose will havealot to do with your intended uses and your budget. I hope the above has been of use to you, and happy fishing. Fly ငါးဖမ်းကိရိယာများ: The Basic Choices in Waders
လူငယ်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ – တစ် ဦး ကလျင်မြန်စွာ primer
ထိုသို့သောရိုးရှင်းသောအဘို့ပုံရသည်, ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု, သင်၏အားကစားသားသို့မဟုတ်သမီးအတွက်ဝယ်ရန်လွယ်ကူသည်. ဒါပေမယ့်အမှန်တရားက, ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. မစိုးရိမ်နှင့်, အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကသင့်ကလေးသို့မဟုတ်သမီးလိုချင်သောဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ကိုရရန်လမ်းမှန်သို့လမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်. တရားဝင်လိဂ်၌, လူငယ်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့များသည်တစ်ခါတစ်ရံအစဉ်အလာနှင့်သစ်သားများဖြစ်သော်လည်းမကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်, သူတို့လူမီနီယမ်ဖြစ်ကြသည်. လူမီနီယမ်လင်းနို့များသည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအထိအမှန်တကယ်မိတ်ဆက်မခံခဲ့ရဘဲဤလူငယ်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့များသည်သေးငယ်သည်, ပိုမိုပေါ့ပါးသည်, ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုအစွမ်းထက်, သူတို့ရဲ့သစ်သား counterparts တွေကိုထက်. သင့်ရဲ့ကလေးဘေ့စ်ဘောလင်းနို့အဘို့အစျေးဝယ်တဲ့အခါမှာဒါ, ပထမ ဦး ဆုံးသူတို့ရဲ့လိဂ်အတွက်လိုအပ်သောလင်းနို့အမျိုးအစားကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့မည်မျှအရှည်နှင့်အကျယ်ပိုကောင်းပါတယ်ဆုံးဖြတ်ရန်. ထိုအချိန်မှစ, ၎င်းသည်ရွေ့လျားနေစဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လင်းနို့သည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပုံအကြောင်းဖြစ်သည်. လင်းနို့များသည်ထိုဘောလုံးကိုရိုက်ရန်အခွင့်အလမ်းပိုရှိသည်, ဒါပေမယ့်ပေါ့ပါးလင်းနို့, စွမ်းအင်ပိုကောင်းတဲ့ Battery's swing နဲ့ဘောလုံးဟာပိုမြန်ပြီးဝေးသွားမှာပါ! ဒါ့အပြင်, ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ပေါ်တွင်စည်ထူသောအရာသည်ပိုမိုအားကောင်းသောထိခြင်းကိုဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကလင်းနို့ကိုလည်းအလေးချိန်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာအားလုံးသင်နှစ်သက်သောရိုက်စတိုင်ဆင်းလာပါတယ်. ထွက်ရှိအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများသည်, ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိလူငယ်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့များကိုသင်၏ဒေသခံအားကစားပစ္စည်းဆိုင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ – သင်များသောအားဖြင့်အွန်လိုင်းငွေအမြောက်အများစုဆောင်းနိုင်သည်. ဒါ့အပြင်, သငျသညျစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာပတ်ပတ်လည်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့လွှဲခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်ကတည်းက, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရိုက်နှက်သည့်အကွာအဝေးအမျိုးမျိုးတွင်လင်းနို့များနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းသည်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ကိုရွေးရန်နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်သည်. လူငယ်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ – တစ် ဦး ကလျင်မြန်စွာ primer
MARTIAL အနုပညာ –5ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းများ
သင်တစ် ဦး သည်ခိုင်ခံ့တန်ဖိုးထားလျှင်, ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသည်ကြီးမားသောအချိန်များကိုဖြတ်သန်းပြီးသင်၏အမြင့်ဆုံးသောပန်းတိုင်များကိုရောက်ရှိရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်, ကိုယ်ခံပညာသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏. လူတစ် ဦး ၏မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသည်ကြွက်သားတစ်ခုနှင့်တူသည်, ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန်အလို့ငှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည်. ထဲမှာ 20 ငါတစ် ဦး တီထွင်ခဲ့ကြငါတို့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကိုယ်ခံပညာကိုဆုံးမbeenဝါဒပေးခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာ5Self- ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းမှခြေလှမ်းချဉ်းကပ်မှု. ဤရွေ့ကား5ခြေလှမ်းများမည်သူမဆိုသင်ယူနိုင်ပါတယ် ‘ မှန်ကန်သောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူ: 1. ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဟန်အနေအထားမှန်ကန်သော. မှန်ကန်သောကိုယ်ခန္ဓာအနေအထား၏အရေးပါမှုသည်အဓိကဖြစ်သည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်လျှို့ဝှက်ပို့ပေးပါ, ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုသယ်ဆောင်သည့်နည်းဖြင့်သတိမေ့နေသောမက်ဆေ့ခ်ျများ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာနထောင်လွှားပါ, ယုံကြည်မှုနှင့်လုံခြုံရေး. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်လိုခေါ်ပြီးမင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကပြပါလိမ့်မယ်. 2. သင့်လျော်သောမျက်လုံးချင်းဆက်သွယ်ပါ. အခြားသူများကိုစကားပြောသောအခါသင့်တော်သောမျက်လုံးချင်းဆုံမိခြင်းသည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်. သင်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောပြီးချက်ချင်းဆက်သွယ်မှုခံစားခဲ့ရဖူးပါသလား? သငျသညျလိုပဲသင်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစဉ်အမြဲလူသိများပါတယ်? အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်, သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ကြသည်, နှင့်သင့်လျော်သောမျက်စိ - အဆက်အသွယ်. 3. ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ခြင်း. ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ခြင်းကိုလူတိုင်းကပြောကြသည်, လူအများစုကဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ကြသည်. သို့ဖြစ်လျှင်လူအများစုအဘယ်ကြောင့်အမှတ်အသားမလွဲပါသနည်း? သူတို့ကရည်မှန်းချက်မှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်စည်းကမ်းနှင့်ယုံကြည်မှုမရှိကြပါလို့ပဲ. ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင့်အားရည်မှန်းချက်များချမှတ်ရန်နှင့်အမှန်တကယ်အောင်မြင်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုသင်ကြားပေးသည်! 4. ဆက်သွယ်ရေး. သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ရန်သင်လိုချင်သောအရာကိုရရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. သူတို့သည်သင်၏ကလေးများဖြစ်ကြသည်, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, ဝန်ထမ်းများသို့မဟုတ်သူဌေး, ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကလှုံ့ဆော်မှုပေးတယ်. ကျနော်တို့ကဒီလှုံဆော်အားပေးပုံသေနည်းသင်ပေး. 5. ဆရာ. အထက်ပါကျွမ်းကျင်မှုအားလုံး, ကျန်းမာသန်စွမ်းသောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းသည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခြားနားမှုအားလုံးကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်. သငျသညျကိုယ်ခံပညာသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုဘယ်လိုကူညီနိုင်ပုံကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်, ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်တည်နေရာသုံးခုထဲကတစ်ခုကို Bellevue မှာဆက်သွယ်ပါ, Lynnwood သို့မဟုတ် Kent, ဝါရှင်တန်သည် 800-508-6141 သို့မဟုတ် martialadvice@hotmail.com တွင်အခမဲ့ဖွင့်လှစ်ရန်2ရက်သတ္တပတ်လမ်းကြောင်းတိမ်းညွတ်. ဒါ့အပြင်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကို www.kungfutemple.com နှင့် www.martialarts-instruction.com တွင်ကြည့်ပါ, ရောဘတ်ဂျုံးစ်မာစတာနည်းပြ 6th Degree Black Belt ပိုင်ရှင်, Kempo ကိုယ်ခံပညာလေ့လာရေးအကယ်ဒမီ –5ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းများ
NEKitesurfing – ယူကေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Kitesurfing ဆိုင်
Kitesurfing သည်သင်လေကိုစွမ်းအင်အသုံးပြုရန်စွန်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါသင်ရေကို ဖြတ်၍ မောင်းနှင်သောဘုတ်အဖွဲ့သို့ချည်နှောင်သည်။? ယခုအားကစားသည်ယူကေကိုမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေခြင်းဖြစ်သည်, 1990 ရဲ့နှောင်းပိုင်းအတွက်အနည်းငယ်လူကနေကျော်မှတိုင်းပိုပြီးလူကြိုက်များကြီးထွားလာ 7000 အခု 2007.? ယူကေရှိкайтစိုင်းစီးသူတစ် ဦး သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၆ မီတာမှနှစ်ထပ်ကိန်းအနေဖြင့်ရှိသည့်စွန်တစ်ခုလိုအပ်သည်, ညာဘက် 18 မီတာအထိသူတို့အားအလင်းလေတိုက်နွေရာသီနေ့ရက်ကာလအဘို့။? အေးမြသောမြောက်ပင်လယ်ကိုကိုင်တွယ်ရန်၎င်းတို့အတွက်ကောင်းသော 5mm x 3mm wetsuit လည်းလိုအပ်လိမ့်မည်။? အဆိုပါစွန်ပျံသန်းဖို့စွန်အဖြစ်တစ်ဘားနှင့်လိုင်းများအစုံလိုအပ်သည်။? Kitesurfers များသည်သာမန်အားဖြင့်စတင်သည် 1 စွန်ဒါပေမယ့်သူတို့တိုးတက်အဖြစ်, သူတို့သည်များသောအားဖြင့်လေထုအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကိုင်တွယ်ရန်မြှားတောင့်များကိုတည်ဆောက်လေ့ရှိသည်။? လှိုင်းတွေကိုလှိုင်းဆွဲနိုင်တယ်, သို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်ရေအတွက်ကြီးမားသောခုန်မြှင့်တင်ရန်။? သင်လှည့်ပတ်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်အလွတ်ပုံစံလှည့်ကွက်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။? ယခုစွန်လှန်ခြင်းအတွက်သင်သွားနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်. NEKitesurfing သည် Northumberland ရှိဤအံ့သြဖွယ်အားကစားကိုသင်ကြားပေးသည်, အင်္ဂလန်၏အရှေ့မြောက်။? အဆိုပါstရိယာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အပြည့်အဝနှင့်ပြည့်၏, အဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်များနှင့်လူအနည်းငယ် – kitesurfing သင်ယူခြင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။? အကြိုက်ဆုံးအစက်အပြောက် Beadnell ဂလားပင်လယ်အော်ဖြစ်ကြသည်, Budle ဂလားပင်လယ်အော်, Druridge ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်နောက်ခံမှ Bamburgh ရဲတိုက်နှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Bamburgh ကမ်းခြေ. NEKitesurfing သည်ကျောင်းသားများကိုနောက်ဆုံးပေါ်စက်ကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးသည်. NEKitesurfing – ယူကေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Kitesurfing ဆိုင်
နောက်ဆုံးတော့, ဘဏ်ကိုမချိုးဖျက်နိုင်သည့် GPS စနစ်ပါသောငါးရှာစက်
သင်၏လှေအောက်ရှိငါးသည်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုပြောပြနိုင်ခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. ဒါဟာသင့်ကိုမြုံနေသောရေထဲသို့နာရီပေါင်းများစွာချွေတာနိုင်စေသည်. လင်းယုန်ငါးရှာစက်နှင့်သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာများနှင့်၎င်း၏ရွေ့လျားမည့်အချိန်ရှိမရှိကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ရလိမ့်မည်, သို့မဟုတ်ချပစ်ရန်အချိန်. ဘဏ်ကိုမချိုးဖောက်ဘဲငါးများကိုရှာရန်ခွင့်ပြုမည့်ငါးရှာစက်ကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်, ကူဒါ 168 သင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်နှင့်အတူထုပ်ပိုးပြီးအပြည့်အဝ -of-features တွေ system ကိုတွေ့လိမ့်မည် 168 ထွ. သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုဂုဏ်ယူနိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်. အဆိုပါ Cuda တစ် ဦး ပါရှိပါတယ်4‘ လက်မထောင့်ဖြတ်မျက်နှာပြင်. ၎င်းသည်အဓိပ္ပါယ်မြင့်မားသည်, 168 ဒေါင်လိုက် pixel resolution ကို, backlit မျက်နှာပြင်နှင့် keypad,4level ကိုမီးခိုးရောင်စနစ်. ဒါတွေအားလုံးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ၎င်းသည်သင့်အတွက်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ရှိရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုပေးလိမ့်မည်. ဒါဟာသင့်ကိုမြင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, သင်၏ sonar ပုံကိုရှင်းလင်းစွာဖြင့်. ၎င်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသည်၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေသည့်အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးရေပေါ်ရောက်သောအခါ၎င်းသည်အလွန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်. အဆိုပါ sonar အတိမ်အနက်ကိုဖြစ်ပါတယ် 600 ခြေထောက်နဲ့ 800 ပါဝါ၏ watts က. ၎င်းသည်ရေကန်ငယ်အတွက်သို့မဟုတ်ရေကန်ကြီးတစ်ခု၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာကိုမြင်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပါတယ်, 60 အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်ပြီးသင့်အားအောက်တွင်ရှိနေသောသင်၏ငါးများကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်မည့်ဒီဂရီငါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစနစ်. သင်သည်ဤ sonar ဖြင့်အခြားစွမ်းရည်များကိုရရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်. ဥပမာ, Grayline သည်သင်၏ငါးကိုအနီးအနားရှိအဆောက်အအုံနှင့်ဆန့်ကျင်။ သော်လည်းကောင်းကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ပုန်းနေလျှင်သော်သင်၏ငါးကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်. ဒီမရှိရင်, မင်းဒါကိုဘယ်တော့မှသတိမပြုမိဘူး. သင်၏ငါးသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်, သူဘယ်လောက်နက်ရှိုင်းတယ်၊ သူဘာဆက်လုပ်ရမလဲ! ဒါကမင်းကိုကူညီဖို့ကူညီလိမ့်မယ်! အဆိုပါ Cuda 168 ထို့အပြင်တစ် ဦး လွယ်ကူပါတယ်, လျင်မြန်စွာချိတ်ဆက်ပါကအင်္ဂါရပ်ဖြုတ်. အဘယ်အရာမျှမကကြိုးမဲ့ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စများနှင့်ဆက်ဆံခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားပြီး၎င်းစနစ်က၎င်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်. ဒီလင်းယုန်ကူဒါကမ်းလှမ်းဖို့အများကြီးနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသော bargain ဖြစ်ပါတယ်! နောက်ဆုံးတော့, ဘဏ်ကိုမချိုးဖျက်နိုင်သည့် GPS စနစ်ပါသောငါးရှာစက်
Escrima – ဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်ခံပညာ
Escrima သည် ၁၅၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှစတင်ကာပေါ်ပြူလာဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်, စပိန်အားဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းများကိုလိုနီကာလအတွင်း. Escrima သည်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်းလက်တွေ့ကျကျပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမူလကမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်လက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်. Escrima ကို Eskrima ကဲ့သို့သောအခြားနာမည်များစွာဖြင့်လည်းလူသိများသည်, Arnis, Arnis က de Mano, Kali နှင့် FMA (ဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်ခံပညာ). ၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုကြောင့်ဖြစ်သည်, Escrima ကိုရေတပ်တံဆိပ်များနှင့်တပ်မတော်အထူးတပ်ဖွဲ့များအပါအ ၀ င်အထူးတပ်ဖွဲ့များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သင်ကြားပေးသည်. အကျဉ်းချုပ်သမိုင်း: Escrima (သို့) ဖိလစ်ပိုင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာသည်တရုတ်နိုင်ငံမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုလူအများကယုံကြည်ကြသည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် Kun Tao ကဲ့သို့သောတိုက်ပွဲများကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်, Chuan Fa နှင့် Tai Chi နှစ်ချောင်းပုံစံ. အချို့က Escrima အနုပညာပုံစံကိုဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများမှအပြည့်အဝတီထွင်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်. သို့သော်, အများဆုံးယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းပြချက်စပိန်ကိုလိုနီများ၏သမိုင်းအတွက်အမြစ်တွယ်ခံရဖို့ပုံရသည်. စပိန်ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အခါ, Escrima နှင့်တူသောအနုပညာပုံစံတစ်မျိုးရှိပြီးသားဖြစ်သော်လည်းအပန်းဖြေခြင်းသာဖြစ်သည်. သို့သော်, စပိန်သည်ဌာနေဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး Bolo ကဲ့သို့သောလက်နက်များအားတားမြစ်သည့်အခါဤအနုပညာသည်ပိုမိုသောကိုယ်ခံပညာစည်းကမ်းသို့တိုးတက်လာသည် (တောခ), ဓားများနှင့်တိုက်ပွဲများတုတ် ၁၇၀၀ ခုနှစ်တွင်. အမေရိကန်တွေမ ၀ င်ခင်အထိလျှို့ဝှက်အနုပညာလက်ရာတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ် 1898. ထိုအချိန်မှစ, ဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်ခံပညာသည်လူသိများလာပြီးလူကြိုက်များလာသည်. အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ, Escrima ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဟာဝိုင်ယီနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအမေရိကန်ပြည်နယ်များဖြစ်သည်. Escrima ရှိလက်နက်များနှင့်ခြေလှမ်းများ: အခြားကိုယ်ခံပညာပုံစံများနှင့်မတူသည်, Escrima ၏အခြေခံသဘောတရားများကိုလေ့လာရန်အဓိကကိရိယာမှာလက်နက်ကိုင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်, အရာဗလာလက်နည်းစနစ်များကနောက်တော်သို့လိုက်သည်. Rattan တုတ်သည် Escrima လေ့ကျင့်ရေးတွင်အသုံးအများဆုံးသောလက်နက်ဖြစ်သည်, sparring အခါလက်နှင့် ဦး ခေါင်းကာကွယ်မှုပါဝင်သည်. အခြားလက်နက်များတွင်သစ်မာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမီးရှို့။ ခိုင်ခံ့သောတုတ်များပါဝင်သည်, ထိုကဲ့သို့သော Molave ​​သို့မဟုတ် Kamagong အဖြစ် (တကယ). ခေတ်သစ်ဗားရှင်းများကိုလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်, အခြားသတ္တုများ, သို့မဟုတ်မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုပလတ်စတစ်. Nunchaku (Kung Fu တုတ် (သို့) နှစ်ချောင်းဟုလည်းလူသိများသည်) လက်နက်အားမင်းသားဘရုစ်လီကလူကြိုက်များခဲ့သည်, Escrima ၏ avid ယောဂီ. တစ်ခုချင်းစီကိုအကွာအဝေး – ပြိုင်ဘက်များအကြားအကွာအဝေး – Escrima ရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် footwork နည်းစနစ်ရှိပါတယ်. ကောင်းသော footwork ဤအကွာအဝေး၏ထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်. တြိဂံများဖြင့်တြိဂံ၏ထောင့်နှစ်ထောင့်နှင့်တတိယထောင့်သို့ခြေလှမ်းများဖြင့်ခြေရာခံသည်သရုပ်ဖော်ထားသည်. တြိဂံ၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်အရွယ်အစားသည်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်တွင်မူတည်သည်. Escrima အချက်အလက်: 1. Escrima သည်ခက်ခဲသောအရောအနှောဖြစ်သည် (ကရာတေးလိုပဲ) နှင့်ပျော့ပျောင်းသော (Tai Chi Ch'uan လိုပဲ) စတိုင်များ. 2. Escrima သည်ယူနီဖောင်းများမလိုအပ်ဘဲစံပြလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲများတွင်သင်ကြားခြင်းခံရသည်. 3. ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနည်းစနစ်များကိုသာအာရုံမစိုက်ဘဲစော်ကားမှုကိုသာပြုသည်, တိုက်ခိုက်ရေးစတိုင်များ. 4. Escrima တွင်သင်တန်းပို့ချသူများ၏သက်တမ်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ခေါင်းစဉ်များမှအပတရားဝင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ. 5. Escrima ရှိစွမ်းအင်အများစုသည်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုစီးပွားရေးတို့မှဆင်းသက်လာသည်, ခွန်အားထက်. 6. Escrima သည်ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်, လက်နက်နှင့်အချည်းနှီးသောနည်းစနစ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်. 7. Escrima သည်ပြိုင်ဘက်မျိုးစုံကိုတိုက်ခိုက်ရန်ထိရောက်သောလေ့ကျင့်မှုပေးသည်. Escrima – ဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်ခံပညာ
အားလုံးအင်္ဂလန်မြက်ခင်းတင်းနစ် & Croquet ကလပ်တံခါးဖွင့်သည်. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှတင်းနစ်ပရိသတ်များထောင်ပေါင်းများစွာသည်လန်ဒန်သို့လာရောက်ကာအကောင်းဆုံးတင်းနစ်ကစားသမားများက၎င်းကိုတိုက်ထုတ်နေသည့်အကြီးမားဆုံးတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွင်ကြည့်နေကြသည်။. Wimbledon မှာကျင်းပတဲ့ Grand Slam ပွဲဟာ ၂၅ ဇွန်မှာစတင်ပြီး ၈ ရက်နေ့အထိကြာမှာဖြစ်တယ်။ Roger Federer ကနေ Rafael Nadal နဲ့ Maria Sharapova အထိ Williams ရဲ့ညီမ Serena နဲ့ Venus အထိတင်းနစ်ကစားသမားတွေကိုတွေ့မှာပါ။. သင်လက်မှတ်တစ်ခုရရှိရန်ကံကောင်းနေလျှင်, Center Court တွင်ပြုလုပ်နေသောလုပ်ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်ပြီးအနီးအနားရှိဟိုတယ်တစ်ခုတွင်တည်းခိုခြင်းဖြင့်သင်၏ဘဝတစ်သက်တာအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေပါ. သင်လက်မှတ်မရှိဘူးဆိုရင်, တံခါးဖွင့်သာဖွင့်ထားသော်လည်းမနက် ၇ နာရီထက်နောက်တဖန်တန်းစီရန်အကြံပြုသည် 10.30 သင်၏လက်မှတ်အခွင့်အလမ်းနှင့်သမိုင်းတွင်အအောင်မြင်ဆုံးတင်းနစ်ကစားသမားများကိုတွေ့မြင်ခြင်း. Wimbledon သည်လန်ဒန်အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးနေရာထိုင်ခင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုဟိုတယ်များကို Bed အထိရှာနိုင်သည် & နံနက်စာနှင့်တိုက်ခန်းများ. အနီးဆုံးပြွန်ဘူတာကတော့ Southfields, ခရိုင်လိုင်းနှင့်ရထားဘူတာရုံ Wimbledon ပေါ်မှာ. London နေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေခြင်းသည် tubehotels.com တွင်အလွယ်တကူလွယ်ကူသည်. သင်အိပ်ရာရှာနေလား & မနက်စာ, ဇိမ်ခံကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ကြယ်သုံးပွင့်ဟိုတယ်, tubehotels သည်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်လုပ်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်. ကျော်လွန် 700 လန်ဒန်ရှိဟိုတယ်များကိုမြေပုံပေါ်တွင်ပြသထားသည်။ လန်ဒန်စခန်းရှိဘူတာများကအနီးအနားရှိနေရာထိုင်ခင်းများကိုကြည့်ရှုရန်ပြွန်ဘူတာတစ်ခုကိုရွေးသည်. Wimbledon မှာရွေးချယ်စရာဟိုတယ်တွေအများကြီးရှိတယ်, ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်: ဟိုတယ် Wayfairer 3* Wimbledon မြို့၏အလယ်တွင်ဤဟိုတယ်သည်နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည် 0.51 Wimbledon ပြွန်ဘူတာကနေသို့မဟုတ်မိုင် 1.91 Southfields ပြွန်ဘူတာကနေမိုင်. Cannizaro အိမ် 4* Cannizaro House သည်ခေတ်သစ်လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြင့်နေထိုင်သောအကောင်းဆုံး manor အိမ်ကိုပေးထားသည်. ဟိုတယ်ကတည်ရှိတယ် 1.16 Wimbledon ပြွန်ဘူတာကနေသို့မဟုတ်မိုင် 1.9 Best Western Lodge ဟိုတယ်မှ Southfields ပြွန်ဘူတာမှမိုင် 3* ဒီဟိုတယ်ဟာအစဉ်အလာကင်းလွတ်တဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးကြီးစွာပေးပါတယ်. တည်နေရာသာအတူစုံလင်သည် 2.51 Wimbledon ပြွန်ဘူတာကနေသို့မဟုတ်မိုင် 0.78 Southfields ပြွန်ဘူတာကနေမိုင်. Wimbledon ချန်ပီယံရှစ်အတွက်လန်ဒန်နေရာထိုင်ခင်း
အားကစားရွှံ့စေး Tip ကိုဇွန်လ 2008 The Paragon Sporting School မှထုတ်ဝေသည်
အားလုံးရွှံ့စေး & Wing shooters တွေကပိုကောင်းအောင်ရိုက်ချင်ကြတယ်. သို့သော်များစွာသောသူတို့အဘို့, ပစ်ခတ်မှုအမှားများကိုယှဉ်ပြိုင်မှုကာလအတွင်းစိတ်ပျက်ဖန်တီး, လယ်ပြင်၌, ပင်အလေ့အကျင့်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း. ဒန် Schindler shooters သင်ပေး, အားလုံးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်ကနေ, ရိုက်ကူးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုက်ချက်မတိုင်မီနှင့်ကာလအတွင်း၌အမှားများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပိုမိုကိုက်ညီမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုဖန်တီးနိုင်သည်. လတိုင်း, ဒန်သည်သင်သေနတ်ပစ်သေတ္တာနှင့်သင်၏ရမှတ်စာရွက်ပေါ်တွင် ပို၍ တသမတ်တည်းဖြစ်စေရန်ကူညီရန်အတွက်အသစ်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်. ဇွန်လ 2008 အစွန်အဖျားအများပြည်သူဖြန့်ချိခဲ့သည်: ကျွန်တော့်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးဘယ်မှာလဲ? နှောင်းပိုင်းတွင် 2007 ကျွန်ုပ်၏ရိုက်ကူးခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်. ဆိုလိုတာကငါဒီအပြောင်းအလဲတွေအပေါ်ငါ့ရဲ့အာရုံကိုအာရုံစိုက်နေတယ်. ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာတော့ဒီအပြောင်းအလဲတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတုန်းပဲ, တောင်မှငါ့ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း. ကြောင်း၏ရလဒ်အဖြစ်, ငါ့အာရုံစူးစိုက်မှုငါ့အရိုက်ကူး၏တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ် riveted, ငါချော်ငါပုံမှန်အားဖြင့်မလုပ်ကြဘူးအမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်…….. အားကစားရွှံ့စေး Tip ကိုဇွန်လ 2008 The Paragon Sporting School မှထုတ်ဝေသည်
Kayaking နှင့်ကနူးပြိုင်ပွဲများအတွက် T'ai Chi
ကယားလှေလှော်ခြင်းနှင့်ကနူးလှေများသည်ရေလှောင်ကန်နှင့်ရေတို့ပါ ၀ င်သည်. Tai Chi, ကိုယ်ခံပညာ၏စတိုင်, ရေနှင့်လှေများမရှိသည့်မြေပေါ်တွင်လေ့ကျင့်သည်. သူတို့နှစ် ဦး သည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိဟုထင်ရသော်လည်း T'ai Chi သည်ရေအားကစားသမားများအားလှေလှော်ခြင်းနှင့်ကနူးလှေလှော်ပြိုင်ပွဲများကဲ့သို့အကျိုးရှိသည်ကိုသင်သိပါသလား။? လှော်လှလှပပရွေ့လျားရန်လိုအပ်သည်, ပြင်းပြင်းထန်ထန်, နှင့်ကြမ်းတမ်းသောရေပေါ်တွင်မျှတစွာ. ဒါဟာအစလက်နက်နှင့်နောက်ကျောအပေါ်အများကြီး strain တတ်၏, မှားယွင်းစွာပြုမိလျှင်. T'ai Chi သည်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အားကစားသည်တူညီသောအခြေခံမူများအတိုင်းလိုက်ဖက်သောကြောင့်လှော်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်. Karen Knight နှင့် Betsey Forster တို့ဖြစ်သည်, ကလှေလှော်ခြင်းနှင့်ကနူးလှေလှော်ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ, မှန်မှန် T'ai Chi လုပ်ရန်ဝန်ခံသည်. သူတို့အဆိုအရ, T'ai Chi Cross- လေ့ကျင့်ရေးပေးသည်. သူတို့ကလှေလှော်ခြင်းနှင့် T'ai Chi တိုးတက်မှုအတွက်နှစ် ဦး စလုံး၏အလေ့အကျင့်လုပ်သောတစ် ဦး ချင်းစီကတခြား၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အခြေခံမူကိုအားဖြည့်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်. သူတို့ကဖြည့်စွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာ paddlers ၏စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းအင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းထည့်သွင်း. အဆိုပါနှစ်ခုကယပ်လှေလှည့်လည်လှည့်လည်ခြင်းအခြေခံမူများနှင့်ဖြည့်စွက်ထားသော T'ai Chi အလေ့အထများဖြစ်သည်. မည်သည့်ရေအားကစား၌, သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြုထားရန်လိုအပ်သည်, တိတ်ဆိတ်, နှင့်တည်ငြိမ်သော. ဤစရိုက်များသည်သင်၏လှေပေါ်တွင်ထင်ဟပ်ပြီးလှေပေါ်တွင်နေခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းမှစွန့်ပစ်ခြင်းကြားခြားနားချက်ကိုစာလုံးပေါင်းဖော်ပြသည်. သင်၏ခန္တာကိုယ်နှင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားသည်ကယက်လှယ်ခြင်းနှင့်ကနူးလှေလှော်ပြိုင်ခြင်းတို့တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်. ဖြောင့်မတ်စွာထိုင်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကိုတင်ပါးကြားတွင်တူညီစွာဖြန့်ပါ. ဤအနေအထားသည်သင်၏အထက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးသင်၏အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်အားလှေကိုပိုမိုထိန်းချုပ်စေသည်. သင်၏နှာခေါင်းကို align လုပ်ရန်အရေးကြီးသည်, ခါး, တစ်ခုတည်းယူနစ်ဖန်တီးရန်နှင့် tailbone. သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရွေ့လျားစေပြီးလှော်ခတ်စေခြင်းဖြင့်ဒဏ်ရာရနိုင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်. နောက်ထပ်နိယာမ, အဆိုပါ paddler ရဲ့ box ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်, လှိမ့်လေဖြတ်အတွက်ပါဝါထည့်သွင်း. သင်၏ပခုံးလေယာဉ်၏ရှေ့တွင်လက်နှင့်လက်မောင်းများကိုတန်းညှိခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရရှိနိုင်သည်. ၎င်းသည်သင်၏လက်များနှင့်ပခုံးများကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မောင်းနှင်နေစေကာမူယူနစ်တစ်ခုအဖြစ်ရွေ့လျားနေစေရန်သေချာစေသည်. လှေလှော်လှော်လှော်သည်လှေလှော်ပြေးလမ်းအတွက်အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်. အများစုမှာတည်ငြိမ်သောလှော်ခတ်ခြင်းကိုကနူးလှေများ၏တိကျသောအတိုင်းအတာအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်’ ကျွမ်းကျင်မှု. လှေကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ပြီးလှေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေရန်ခက်ခဲသော်လည်းကနူးလှေကောင်းတစ်ကောင်ကလုပ်နိုင်သည်. လှေကိုစူးစူးဝါးဝါးတားခြင်းနှင့်လှေကိုလှုပ်ခါခြင်းကိုရှောင်ခြင်းသည်လှေကိုတည်ငြိမ်စေရန်နှင့်လှော်ခတ်စေသောလှုပ်ရှားမှုကိုနှေးနှေးတိကျမှုရှိစေရန်ပြုလုပ်သည်. လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုတွက်ချက်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မလိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုကြောင့်လှေကိုအကြမ်းအားဖြင့်လှဲနိူင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. တည်ငြိမ်မှု, ချိန်ခွင်လျှာ, နှင့်အာဏာ kayaking ၏အဓိကအခြေခံမူဖြစ်ကြသည်. ဤရွေ့ကား T'ai Chi အလေ့အကျင့်များဂရုစိုက်အလွန်ရှုထောင့်ဖြစ်ကြသည်. T'ai Chi လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုမစတင်မီအကြံပြုသည်။ ပြိုင်ကားသမားများကို ဗဟိုပြု၍ သူတို့၏အလောင်းများကိုရေ၌တိတ်ဆိတ်စွာကူညီနိုင်သည်. ဒါဟာနှာခေါင်း၏ aligning ကဲ့သို့ကျောရိုး elongating ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်, ခါး, နှင့်ကယပ်လှေနှင့်ကနူးပြိုင်ပွဲများတွင် tailbone, ဒီအချိန်ပဲ, လေ့ကျင့်ခန်းတက်ရပ်နေပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်. ဒီလမ်းလျှောက်မှုကပြိုင်ကားသမားတွေကိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာရုံစိုက်စေပြီးမလုံလောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတိပြုစေတယ်. လှေကားထစ်ကဲ့သို့သောလက်နက်များမှတမင်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့်အဆင့်များကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်သည်. Hold The Ball လှုပ်ရှားမှုသည်ပြိုင်ကားသမားများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်’ လှော်ရဲ့ box ကို. ဒီလေ့ကျင့်ခန်း၌, ခါး, လက်နက်, နှင့်ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီသူတို့ကိုယူနစ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ဖို့အသုံးပြုရနိုင်အောင်အလုပ်လုပ် torso. ခါးလည်ခြင်းသည်လှုပ်ရှားမှု၏တိုးတက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ခါးနှင့်တင်ပါးကိုအောက်ခံကိုယ်ထည်တွင်အမြစ်တွယ်စေသောကြောင့်ပါဝါနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုထပ်မံပေးသည်. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူ, ကနူးလှေ’ အလောင်းတွေတည်ငြိမ်ဖြစ်ခြင်းမှနေသားတကျရှိပါသည်, ချိန်ခွင်လျှာကိုထိန်းသိမ်း, စွမ်းအင်ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်း. နိုက်နှင့်ဖော့စတာတို့ကကေးလှီခြင်းနှင့်ကနူးလှေလှော်ပြိုင်ပွဲအားအားကစားပြိုင်ပွဲအဖြစ်ကစားရန်စဉ်းစားသူများအတွက် Tai Chi ကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်ရန်အကြံပေးသည်။. ဤလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုပုံစံသည်စိတ်အားထက်သန်သူများအားပိုမိုကောင်းမွန်သောမြင်းစီးသူရဲများနှင့်အရည်ပျော်လွယ်သူများဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးသည်. ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် T'ai Chi အစည်းအဝေးများသည်ကနူးလှေများကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးအောင်မြင်သောလှေလှော်ခြင်းနှင့်ကနူးပြိုင်ပွဲပွဲများအတွက်သင့်တော်သည်. Kayaking နှင့်ကနူးပြိုင်ပွဲများအတွက် T'ai Chi
Whitewater Rafting – စိတ်လှုပ်ရှားစရာရှာဖွေသူများအတွက်စွန့်စားမှုမိသားစုအားအနားယူခြင်း
Whitewater ဖောင်ဒေးရှင်းသည်အပြင်ပန်းအားချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သဘာဝတရား၏ဒြပ်စင်များအပေါ်စွဲလန်းနေသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပေါင်းစပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။. အရှိန်ပြင်းစွာစီးဆင်းနေသောရေများဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်လုံးဝမတူပါ, သင်၏မျက်နှာ၌လေပေါ်မှာရှိခြင်း, သငျသညျဘေးအန္တရာယ်ကနေခဏသာဖြစ်သကဲ့သို့သင်၏ထိုင်ခုံခံစားမှုတက်နှင့်တက်ခုန်. အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံး, whitewater rafting သည်အလုံခြုံဆုံးစွန့်စားမှုအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်, အမျိုးသားလုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူမြောက်အမေရိကအတွက်အဓိက outfitter အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်. မြောက်အမေရိကရှိပြည်နယ်နှင့်ပြည်နယ်တိုင်းသည်မြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ်တွင်အဖြူရောင်ရေဖောင်အတွေ့အကြုံများစွာပေးထားသည်. အစပြုသူတွေကတော့သေးငယ်တဲ့ Rapids များကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်, အတန်းအစားငါ-III ကိုအကွာအဝေး၌တည်၏, စိတ်လှုပ်ရှားသူများသည် IV နှင့် V အမျိုးအစားများဖြစ်သော Rapids များကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်. သင်ဟာစွန့်စားခန်းရှာသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်, သို့သော်, သငျသညျကံထဲကဖြစ်လိမ့်မယ်. မြောက်အမေရိကတွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံး Class VI Rapids အချို့ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုခဲယဉ်းလှတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဝါသနာရှင်များတောင်မှအသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး. အကယ်၍ မင်းကသေခြင်းတရားကိုအမှန်တကယ်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အန္တရာယ်ရှိသောဖောင်စီးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားနေရာများစွာရှိသည်. အာဖရိက, ဥပမာ, အတန်းအစား VI ကိုမြစ်အများအပြားခရီးစဉ်ပေးထားပါတယ်, adrenaline အမှိုက်သည်သေစေနိုင်သော Rapids များနှင့်ရင်ဆိုင်ရရုံသာမကဘေးအန္တရာယ်ကင်းသည့်နေရာ၌ပင်မိကျောင်း၊’ ဒေသများ. လုံခြုံခံစားချင်သောသူတို့အဘို့, ပြည်တွင်းဖောင်အတွေ့အကြုံ, ရေဖောင်ခရီးစဉ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏ကြာချိန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်. ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ပြီးအသုံးပြုသော whitewater rafting outfitters များသည်မြင့်မားသောလေ့ကျင့်ထားသောလမ်းညွှန်များနှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဖောင်တပ်ကိရိယာများနှစ်မျိုးလုံး. လမ်းများနှင့် Rapids များကိုသူတို့အိမ်များသိသကဲ့သို့လမ်းပြများကသိသည်, သင်၏ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ဘေးကင်းစွာလမ်းညွှန်ရန်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိရန်အားကိုးနိုင်သည်, တ ဦး တည်းတက်လာသင့်ပါတယ်. အဖြူရောင်ရေဖောင်ဒေးရှင်းအတွေ့အကြုံကိုကြိုးစားဆုံးဖြတ်ရန်သူဆုံးဖြတ်ရမည့်စံသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်, သို့သော်. သင့်လျော်သောဖိနပ်ကို site ပေါ်တွင်ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်. ဤဖိနပ်များသည်ကောင်းစွာကိုက်ညီပြီးလျင်မြန်စွာစိုစွတ်။ ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရမည်. Whitewater rafters သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ၏ဆိုးကျိုးများကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်, နှင့်နေကာမျက်မှန်နှင့်နေရောင်ကာကွယ်ဆေးတလျှောက်ဆောင်ခဲ့ရမည်. မကြာခဏမထက်, သင်မေ့လျော့သင့်ပါတယ်ဤပစ္စည်းများကို outfitter ရဲ့စတိုးဆိုင်မှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မှတ်မိခဲ့ရင်ထက်သူတို့ဟာပိုပြီးစျေးကြီးလိမ့်မယ်. Whitewater rafting သည်သင်၏အတွင်းစိတ်ကိုရှာဖွေသူအားကျေနပ်ရောင့်ရဲစေနိုင်သည့်သဘာဝနယ်ပယ်များနှင့်ထိတွေ့နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။. သငျသညျမိသားစုအားလပ်ရက်အပေါ်လျှင်, သို့သော်, outfitter ကိုရှေ့ဆက်သွားရန်နှင့်သူတို့၏ခရီးစဉ်များအတွက်အသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုရှာဖွေရန်သတိရပါ. Whitewater ဖောင်ဒေးရှင်းများကိုအသက် ၈ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အကြံပြုလေ့မရှိပါ. Whitewater Rafting – စိတ်လှုပ်ရှားစရာရှာဖွေသူများအတွက်စွန့်စားမှုမိသားစုအားအနားယူခြင်း
Capoeira ရန် Martialarm Intro
Capoeira Capoeira သို့ Martialarm နိဒါန်းသည်အာဖရိက - ဘရာဇီးကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်, ဂိမ်း, ၁၇ ရာစုအတွင်းဘရာဇီးတွင်ကျွန်ခံသောအာဖရိကန်လူမျိုးများဖန်တီးခဲ့သောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှု. သင်တန်းသားများကိုတစ် roda ဖွဲ့စည်းထားပါသည် (စက်ဝိုင်း) နှင့်အလှည့်တူရိယာကစား, သီချင်း, နှင့်စက်ဝိုင်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်အားလုံးအတွက် sparring. အဆိုပါဂိမ်းအရည် acrobatic ကစားခြင်းဖြင့်မှတ်သားထားသည်, feints, ရေပန်းစား, နှင့်အခြေခံကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှု, လှည်းအဖြစ်, ကန်, နှင့်ခေါင်းလောင်း. ဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံး, ကစားသမားတစ် ဦး မောင်းရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်သည်, ခရီးစဉ်, ကန်, ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်ခေါက်နိုင်တဲ့ခေါင်းတလား. ဒီထက်မကြာခဏအသုံးပြုသောနည်းစနစ်များတွင်တံတောင်ဆစ်ရိုက်ခြင်းများပါဝင်သည်, ပါး, လာကြတယ်, နှင့်ခန္ဓာကိုယ် - ပစ်. Capoeira ဟုလူသိများသည့်မူကွဲသုံးခုရှိသည် “Capoeira အင်ဂိုလာ”, “Capoeira ဒေသဆိုင်ရာ”, နှင့်အစဉ်အဆက် - ဖြစ်ပေါ်နေသော “ခေတ်ပြိုင် Capoeira”. ၁၆ မှ ၁၉ ရာစုအထိ, ပေါ်တူဂီသည်အာဖရိကအနောက်ပိုင်းမှတောင်အမေရိကသို့ကျွန်များကိုတင်ပို့ခဲ့သည်. တောင်အမေရိကအမေရိကန်ဘရာဇီးသည်အာဖရိကသုံ့ပန်းများအတွက်အသုံးအများဆုံးနေရာဖြစ်ခဲ့သည်[ကိုးကားလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်] နှင့်အတူ 42% အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးတင်ပို့ခံထားရတဲ့လူတွေအားလုံး. အများအားဖြင့်ဘရာဇီးသို့ရောင်းချခြင်းသည် Akan ဖြစ်သည်, အစ်ဂဘို, ရိုရုဘာ, Dahomean, မွတ်စလင်ဂီနီ, ဟာဆာ, နှင့် Bantu (သူတို့တွင် Kongos, Kimbundas နှင့် Kasanjes) အင်ဂိုလာမှ, ကွန်ဂိုနှင့်မိုဇမ်ဘစ်. ထိုအာဖရိကသားများသည်သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဘာသာတရားများကိုကမ္ဘာသစ်သို့ယူဆောင်လာကြသည်. သီအိုရီတစ်ခုအရ capoeira သည်ကြမ်းတမ်းသောပိုးပန်းမှုမှဆင်းသက်လာသည်ဟုဆိုသည်[ကိုးကားလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်] မိန်းမငယ်များ၏ suitors အသုံးပြုသောအင်ဂိုလာအတွက်, သို့သော်, ဤသည်များစွာသောအငြင်းပွားဖွယ်သီအိုရီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒီဂိမ်းကကျွန်ဘဝရောက်နေတဲ့အာဖရိကသားတွေနဲ့ရောက်လာလား၊ ဒါမှမဟုတ်အာဖရိကသားတွေကအရင်ကရှိခဲ့တဲ့ဘရာဇီးလ်ဂိမ်းကိုသန့်စင်တာဟုတ်မဟုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အငြင်းပွားစရာရှိပါတယ်။. capoeira အတွက်ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုမှာအာဖရိကလူမျိုးများအားကျွန်စနစ်၏ဖိနှိပ်မှုအောက်တွင်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်. Capoeira သည်ဖိနှိပ်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်, လျှို့ဝှက်စွာအနုပညာလေ့ကျင့်, ယဉ်ကျေးမှုကိုထုတ်လွှင့်, နှင့်ဝိညာဉ်များရုတ်သိမ်းပေးရန်. သမိုင်းပညာရှင်အချို့ကဘရာဇီးလ်ရှိဌာနေတိုင်းရင်းသားများသည် capoeira ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်. Capoeira ကိုဘရာဇီးလ်အာဖရိကနွယ်ဖွားကျေးကျွန်များကအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည် (ယူဆရအင်ဂိုလာ၏ပေါ်တူဂီကိုလိုနီကနေဝန်ခံခဲ့သည်) 16 ရာစုအတွင်းအချို့သောအချိန်. ကျွန်များအတွက်တိုက်ပွဲကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရန်တရားမဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းက, သူတို့သည်သူတို့၏အနုပညာကိုကျင့်သုံးသောအခါတိုင်းသူတို့သည်မျှသာဖြစ်ဟန်ရှိရန်သူတို့၏ဇာတိအာဖရိကန် ၀ ိညာဉ်ရေးအကများနှင့်ကွဲပြားသည်. ဒီအကများကြောင့် handstands ကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်မှုများပါဝင်ခဲ့သည်, နောက်ကျောလှန်, နှင့်လှည်းဘီး, Capoeira သည်ယနေ့ကိုယ်ခံပညာအားလုံး၏စွမ်းအင်အရှိဆုံးဖြစ်သည်, များစွာသောကန်ဘောတစ် ဦး handstand အနေအထားကနေကွပ်မျက်ခံရခံရအတူ. ၎င်း၏ထိုးစစ်နည်းစနစ်များမှာကန်ဘောဖြစ်သည်, ၎င်း၏ခုခံကာကွယ်နည်းစနစ်အားလုံးအတူတကွရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကနေဝေးသောအစအ ဦး ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများကို၌ရှိကြ၏. အာဖရိကယဉ်ကျေးမှုသည် Capoeira လေ့လာခြင်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, အဓိကအားဖြင့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှု Berimbau ၏ရစ်သမ်ပြုမိကတည်းက, တစ်ခုတည်း- ကြိုးဂီတတူရိယာ. ၂၀ ရာစုတွင်သာ Capoeira ဓလေ့ထုံးတမ်းသည်ဘရာဇီးတွင်တရားဝင်ဖြစ်လာသည်, နှင့်အလွန်ခေတ်သစ်နှစ်များတွင်သာအခြားတိုင်းပြည်များတွင်သင်ကြားပေးခဲ့သည်. In 1942, Mestre Pastinha သည်ရှေးရိုးအနုပညာပုံစံဖြင့်သင်ကြားပို့ချမှုအတွက်ပထမဆုံးတရားဝင်အကယ်ဒမီကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်, capoeira အင်ဂိုလာအဖြစ်လူသိများ. Mestre Pastinha ၏ကြိုးပမ်းမှုများသည် capoeira Angola အားအသစ်စက်စက်အဖြစ်မှဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ပေးခဲ့သည်, ခေတ်မီအနုပညာပုံစံများကိုလူကြိုက်များခဲ့သည်. ဤခေတ်သည် capoeira အနုပညာကိုသင်ကြားပို့ချသည့်ပုံစံတွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှု၏မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်. ယခင်က, capoeira လျှို့ဝှက်စွာအပေါ်လွန်ခဲ့သည်, များသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောတ ဦး တည်းရဲ့ဖခင်သို့မဟုတ် ဦး လေးအဖြစ်ဆွေမျိုးထံမှ, သို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှလူငယ်များသည်ထိုအသိုင်းအဝိုင်းမှသက်ကြီးရွယ်အိုလေ့ကျင့်သူများထံမှလမ်းညွှန်မှုကိုခံယူမည့်အုပ်စုငယ်တစ်ခုတွင်သို့မဟုတ်. ဒီခေတ်ကာလအတွင်း, အကယ်ဒမီစနစ်သည်အနုပညာတွင်ပါ ၀ င်မှု၏အဓိကပုံစံဖြစ်လာသည်. လက်ရှိ, ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးအားလုံးနီးပါးတွင် capoeira အကယ်ဒမီများရှိသည်. capoeira ‘ကျောင်းများပြန့်ပွားမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သောနောက်ထပ်သိသာသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်’ လူ ဦး ရေ၏လူလတ်တန်းစားနှင့်အထက်လူတန်းစားအဖွဲ့ဝင်များပါ ၀ င်သည်. လက်ရှိ, အချို့သောမစ်ထရက်သည်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ပြီး၊ အနုပညာအားအနုပညာကိုရရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အကယ်၍ အကယ်ဒမီတွင်လေ့ကျင့်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုမတတ်နိုင်သော. ၎င်းသည်အနုပညာကိုပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့သောယဉ်ကျေးမှုမှဆင်းသက်လာသူများအတွက်အနုပညာကိုရရှိနိုင်စေရန်အရေးကြီးပုံကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်လေ့ကျင့်သူများအတွက်စိုးရိမ်စရာကိစ္စဖြစ်သည်။. Capoeira ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်မြို့တွင်မဆိုသင်ကြားနိုင်သည်။ Capoeira ၏ကိုယ်ခံပညာသိပ္ပံလမ်းညွှန်ကိုသင်နှင့်အနီးအနားရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုရှာဖွေရန်သင့်အားတိုက်တွန်းလိုပါသည်။! Capoeira ရန် Martialarm Intro
Passagemaking သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တိုးတက်နေပြီးတောင်ပစိဖိတ်ဒေသသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဥရောပကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားမှုတိုးများလာခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။. Passagemaking ခရီးဝေးခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, ကမ်းရိုးတန်း passagemaking ကမ်းနီးသည်, သမုဒ္ဒရာ Passagemaking ကမ်းလွန်ဖြစ်ပါတယ်, သမုဒ္ဒရာသို့မဟုတ်ကြီးမားသောရေကန်ပေါ်မှာ. Passagemaking ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏လှေစီးသောအနာဂတ်တွင်ပါ ၀ င်လိုပါကကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးတည်ဆောက်ထားသည့် powerboat သို့မဟုတ် sailboat ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။, ဒီဟာကလေးနက်တဲ့စီးပွားရေးပဲ, နှင့်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းပလက်ဖောင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. အရေးကြီးတယ်, နှင့်သမ္မာသတိ, ရွက်လွှင့်ရန်အဆင်ပြေသောလှေရှိသည်, ရွက်လွှင့်နေတုန်းမှာအသက်ရှင်ဖို့, passagemaking လျှင်မစ်ရှင်ပါပဲ. အနည်းငယ်လေးသောလေးသည်အကျိုးရှိသည်ရှိသော် passagemaking အများစုမှာလေတိုက်နှုန်းဖြစ်သည်. passagemaking ရွက်လွှင့်ရန်တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ချက်မှာရေနှင့်အစားအစာစွမ်းရည်နှင့်သင်၏စွမ်းရည်ဖြစ်သည်, နှေးလေ, ပိုပြီးပင်လယ်ရေစွမ်းအားလှေတူညီသောကန့်သတ်ရှိသည်. ရှည်လျားသောအကွာအဝေးသင်္ဘောစီးသင်အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်၏အရည်အချင်းများကိုသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်. သငျသညျအဆင့်မြင့်ရွက်သင်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ကောငျးကငျအညွှန်း, သင်စွန့်ခွာမီ cruising နှင့် passagemaking ကျွမ်းကျင်မှု. နေ့စဉ်ရွက်လွှင့်ခြင်းမှသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကမ်းရိုးတန်းလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုကမ်းခြေရှိနောက်ဆိပ်ကမ်းသို့သွားရန်ဖြစ်သည်. သငျသညျညဥ့်သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေ cruising စွန့်စားမှုကျွမ်းကျင်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့, သငျသညျတိုးချဲ့ passagemaking ၏တပြင်လုံးကိုကမ္ဘာသစ်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်. ရှည်လျားသောအကွာအဝေးခရုဇ်ဝိညာဏဖြစ်ရပ်ဆန်းသည်နှင့်ဖြစ်ပါတယ်, နောက်ဆုံးတော့, သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အဘယ်ကြောင့်၎င်းကိုအပြည့်အဝမနေထိုင်ပါသနည်း. ပင်လယ်ကမ်းလွန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည်သင်္ဘောသားတိုင်းကျွမ်းကျင်ရန်ကြိုးစားသောအရာဖြစ်သည်. သမုဒ္ဒရာ Passagemaking
Torry Holt : 1999 မူကြမ်းနေ့ရွေး
Torry Holt ကိုဇွန်လတွင်မွေးဖွားခဲ့သည် 5, 1976 Greensboro ၌တည်၏, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား. Holt သည် NFL ရှိအခြားကျယ်ပြန့်သောလက်ခံသူများကဲ့သို့ကြီးမားခြင်းနှင့်မြန်ဆန်ခြင်းမရှိသော်လည်း, သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့ထိပ်တန်းထစ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသခဲ့သည်. လူကြိုက်များသောနာမည်ကြီး Game Big Game’ ဒါကသူ့အတွက်ကောင်းပါတယ်. အကယ်၍ သူ့အသင်းသည်ကြီးမားသောဖမ်းဆီးမှုကိုလိုအပ်ပါက၎င်းသည်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဖြင့်၎င်းနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်ဟုပြောရန်စိတ်ချရသည်. အထက်တန်းကျောင်းပြီးတဲ့နောက်မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်, နှင့်ဤသူအဘို့အလွန်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်. ကျောင်းတွင်သူနေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းအထင်ကြီးလောက်သောနံပါတ်များကိုပြုစုခဲ့သည်, နှင့်သူ၏အကြီးတန်းရာသီပြီးနောက်တစ်နှစ်တာ၏ ACC ထိုးစစ်ကစားသမားအမည်ရှိခဲ့သည် 1998. ထိုရာသီအတွင်းသူဖမ်းမိခဲ့သည် 88 ထက်ပိုမိုများအတွက်ဘောလုံး 1,604 ကိုက်. သူလည်းဖမ်းမိတယ် 16 touchdown ကြောင်းရာသီဖြတ်သန်းပါတယ်; တစ် ဦး မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်စံချိန်. စိန့်. လူးဝစ် Rams အတွက်ဆthe္ဌခြုံငုံရွေးအတူ Holt ရွေးချယ်ခဲ့သည် 1999 NFL မူကြမ်း. မိမိလူသစ်ရာသီကတည်းကသူသည်ပရိတ်သတ်များအထင်ကြီးခဲ့သည်, အသင်းဖော်, နှင့်လိဂ်အတွက်သင်တန်းကတခြားအသင်းများ. လူသစ်တစ် ဦး အဖြစ် Holt သည်သူ့ကိုယ်သူလိဂ်တွင်အကောင်းဆုံးကစားသမားများထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်ဖမ်းယူခဲ့သည် 53 ဘောလုံးများအတွက် 788 ကိုက်. သူသည် Super Bowl XXXIV တွင်အောင်ပွဲသို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြရာတွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်. မိမိအလူသစ်ရာသီကတည်းက Holt အဆိုပါလိဂ်အတွက်အကောင်းဆုံးကျယ်ပြန့်အသံဖမ်းတစ် ဦး အဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်. သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာစာရင်းဇယားများသည်သူတို့အတွက်ပြောဆိုသည်. ရှစ်ရာသီ၌သူရှိ Rams နှင့်အတူ 712 များအတွက် p ည့်ခံ 10,675 ကိုက်. သူလည်းရှိပါတယ် 64 မိမိအစာရင်းဇယားထွက်ပတ်ပတ်လည်မှ touchdowns. ဘောလုံးကိုသိသူမည်သူမဆို Torry Holt ၏အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှိသည်. သူသည် St အတွက်ချေးငှားရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်များစွာရှိသည်ဟုပြောရန်စိတ်ချရသည်. Louis Rams; ရာလိဂ်အတွက်အခြားအသင်းများအတွက်အကောင်းတစ် ဦး အရာမဟုတ်ပါဘူး! Torry Holt : 1999 မူကြမ်းနေ့ရွေး
2005 US Open Winner – အဲဒါဘာလဲ?
အဖြစ် 2005 US Open ကို Pinehurst တွင်စတင်ခဲ့သည်, NC, နာမတော်ကိုအမှီပြု။ မိုက်ကယ်ကမ့်ဘဲလ်ပထမ ဦး ဆုံးအပြီးသတ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိခံရမခံခဲ့ရပါဘူး. မိုက်ကယ်သည်ယခင်ဖွင့်ပွဲလေးခု၌ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပါ. ကံကောင်းထောက်မစွာသည်သူ၏နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည် 1 အောက်မှာ 69 သူ့ကိုသူ့ကိုကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ဖို့လေနှစ်ကွင်းကိုပေးခဲ့တယ်, ကျားဝုဒ်. မိုက်ကယ်ကဝုဒ်ကိုနောက်ကိုးကိုးလုံးတွင်စွဲဆောင်မှုနှင့်မည်သို့ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သနည်း? ဒါကြောင့်သက်သက်ယုံကြည်မှုဖြစ်ခဲ့သည်? ကျွမ်းကျင်မှု? ကမ့်ဘဲလ်အတွက်အနိုင်ရပေါင်းစပ်ခဲ့ရုံကဘာလဲ? များစွာသောစရိုက်များနှင့်စွမ်းရည်များသည်ဗိုလ်မှူးချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်. အနည်းဆုံးမဟုတ်သည့်အချက်မှာသူတို့အလုပ်အတွက်ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုဖြစ်သည်. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးအများအပြား၏ငြူစူခြင်းဖြစ်နေစဉ်, ဤလူများသည်အနည်းငယ်ယူလိုသောဆန္ဒရှိသည့်နည်းလမ်းကိုလိုက်နာရမည်. ကျနော်တို့ကျည်ကြည့်ရှုအဖြစ်, အားလုံးကြည့်ရတာအရမ်းလွယ်တယ်. သို့တိုင်, နောက်ကွယ်မှာ’ ယနေ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီး, အရင်ကထက်ပိုပြီး, ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းစနစ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပြင်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုသာအာရုံစိုက်ရမည်. ဂေါက်သီးနည်းပညာအသစ်များသည်အကွာအဝေးများစွာကိုတောင်းဆိုသည်, golfer မှယခုထိန်းချုပ်နိုင်နှင့်ပါဝါ. နည်းပညာအသစ်သည်ပြဇာတ်၌ပြောင်းလဲမှုများ၏အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်. ယနေ့ခေတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးတိုင်းနီးပါးသည်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအတွက်ယခင်ကထက်အချိန်ပိုပေးကြသည်. ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်အလွန်ခက်ခဲကြောင်း၊ တသမတ်တည်းထိန်းချုပ်ထားပြီးအားကောင်းသောဂေါက်သီးလွှဲများကိုထိန်းသိမ်းရန်အလို့ငှာသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအားဖြည့်ပေးရမည်. ၄ င်းတို့၏အချိန်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလုပ်လုပ်သောခွန်အားနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်မှုအပေါ်ကောင်းစွာအသုံးပြုထားသည်. ဂေါက်သီးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဂေါက်သီးလွှဲ၏ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုတုပရန်ဖြစ်သည်. ဒီချဉ်းကပ်မှုကတစ်ချိန်တည်းမှာအရာနှစ်ခုပြီးမြောက်ကူညီပေးသည် 1) ပစ်မှတ်ကြွက်သားအုပ်စုတစ်စုရဲ့အစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးတက်လာခြင်းနှင့် 2) အာရုံကြောကြွက်သားစနစ်ကိုသင်တန်းအပေါ်လိုအပ်သောကဲ့သို့အတိအကျလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအေးစက်. ဂေါက်သီးသမားအားလုံးသည်ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုရှိသည့်အားသာချက်များမှသင်ယူသင့်သည်. အဆိုပါဂေါက်သီးလွှဲရှုပ်ထွေးသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်, ခန္ဓာကိုယ်ကနေအများကြီးလိုအပ်. ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောလေ့ကျင့်ခန်းများသည် ပို၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ကြွက်သားဆိုင်ရာကြွက်သားစနစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်ဆင့်ပြည့်စုံနေကြသည်အဖြစ်, သငျသညျလျော့နည်းအားထုတ်မှုနှင့်အတူပိုပြီးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်. ၎င်းသည်ကလပ်အမြန်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသောချောမွေ့သည့်လွှဲသို့ပြန်ဆိုသည်, ထို့ကြောင့်နိမ့်ရမှတ်များရလဒ်. ဂေါက်သီးကစားခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်; နှစ်ပေါင်းများစွာအကျိုးရှိရှိကစားနိုင်မည့်ကစားနည်းကိုသေချာစေရန်ယနေ့စတင်ပါ. 2005 US Open Winner – အဲဒါဘာလဲ?